Dombo reMutengo Mukuru zvinyorwa zvakakoshesesa zvakasarudzwa zviri maererano nezvinhu zvakawanda zvinokosha zvechitendero nedzidziso yeChechi yaJesu Kristu yaVatendi vaMazuva Ekupedzisira. Zvinhu izvi zvakaburitswa neMuporofita Joseph Smith uye zvikashambadzwa mumapepanhau eChechi emazuva ake.
Mwari vanozviratidza kuna Mosesi—Mosesi anoshandurwa chimiro—Anotarisana naSatani—Mosesi anoona nyika zhinji dzakagarwa nevanhu—Nyika dzisingaverengeke dzakasikwa neMwanakomana—Basa raMwari nokubwinya kuunza kusafa neupenyu hwokusingaperi hwemunhu.
Mwari vanosika matenga nenyika—Mhando dzose dzezvinorarama dzakasikwa—Mwari vanosika munhu uye vomupa hutongi pamusoro pezvinhu zvose.
Mwari vakasika zvose zvinhu zviri mweya zvisati zvave sezvazviri panyika—Vakasika munhu, nyama yekutanga, panyika—Mukadzi mubatsiri akakwana kumurume.
Kuti Satani akave Dhiabhorosi sei—Anoyedza Eva—Adama naEva vanopunzika uye rufu rwunopinda munyika.
Adama naEva vanobereka vana—Adama anopira mupiro uye achishandira Mwari—Kaini naAberi vanozvarwa—Kaini anopanduka, anoda Satani kupfuura Mwari, uye anobva ave Kuraswa—Kuponda nekuipa kwakapararira—Vhangeri rinoparidzwa kubvira pakutanga.
Mbeu yaAdama inochengeta bhuku rendangariro—Vana vake vakarurama vanoparidza kutendeuka—Mwari vanozviratidza kuna Enoki—Enoki anoparidza vhangeri—Hurongwa hweruponeso hwakaratidzwa kuna Adama—Akagashira rubhabhatidzo nehupirisita.
Enoki anodzidzisa, anotungamira vanhu, uye anosudurudza makomo—Guta reZioni rinomiswa—Enoki anofanoona kuuya kweMwanakomana weMunhu, mupiro wake werudzikinuro, nokumuka kuvakafa kweVatendi—Anofanoona kuDzorerwa kweVhangaeri, Kuungana, Kuuya kweChipiri, nokudzoka kweZioni.
Metusara anoporofita—Noa nevanakomana vake vanoparidza vhangeri—Kuipa kukuru kunovepo—Kudaidzira kutendeuka hakuteererwe—Mwari vanotsidzira kuti nyama yose iparadzwe neMafashamu.
Abrahama anotsvaga maropafadzo ehurongwa hwemadziteteguru—Anotambudzwa nemapirisita venhema vemuKardea—Jehova vanomuponesa—Mavambo nehurumende yeEgipita anotariswa.
Abrahama anobva muUri kuti aende kuKanani—Jehova anozviratidza kwaari paHarani—Ose maropafadzo evhangeri anovimbiswa kumbeu yake, nokuburikidza nembeu yake kune vose—Anoenda kuKanani uye achizoenda kuEgipita.
Abrahama anodzidza nezvezuva, mwedzi, nyenyedzi kuburikidza neUrimi neTumimi—Ishe vanoratidza kwaari mamiriro ekusingaperi emweya—Anodzidza nezveupenyu pasati pave nenyika, kufanogadzwa, kusikwa, kusarudzwa kweMununuri, uye magariro echipiri emunhu.
VanaMwari vanoronga kusikwa kwenyika nehwose upenyu hurimo—Zvirongwa zvavo zvemazuva matanhatu ekusika zvinomiswa.
VanaMwari vanopedza kuronga kwavo hwekusikwa kwezvinhu zvose—Vanoita kuti zviitike zvekusika maererano nehurongwa hwavo—Adama anotumidza mazita kuchisikwa chipenyu chose.
Jesu anotaura nezvekuuya kwekuparadzwa kweJerusarema—Anotaurawo nezvekuuya kwechipiri kweMwanakomana weMunhu, nekuparadzwa kwevakaipa.
Joseph Smith anotaura nezvemadzinza ake, nhengo dzemhuri, uye nzvimbo dzavakatanga kugara—Kwaive nekufarira zvekunamata kwakanga kusati kwakamboonekwa kumadokero kwedunhu reNew York—Anofunga kunotsvaka ungwaru sekuraira kwaJakobo—Baba neMwana vanoonekwa, uye Joseph anodaidzwa kubasa rake rechiporofita. (Ndima diki 1–20).
Tinotenda muna Mwari, Baba Vokusingapere, neMwanakomana Wavo, Jesu Kristu, nemuneMweya Mutsvene.